Indlela yokuguqulela ii-2 zexesha elidlulileyo leSpanish
Ukuguqulela ixesha elidlulileyo leNgesi ukuya kwisiSpanish
Amaxesha adlulileyo aseSpain anciphisa ukungalungi
Xa uguqulela ukusuka kwisiNgesi ukuya kwisiSpeyin, kufuneka uqale uqonde oko okuthethwa ngesivakalisi sesiNgesi. Oku kuyinyani ngakumbi xa uguqulela ixesha elidlulileyo leNgesi. Masithathe isigwebo esilula ngesiNgesi kwaye sibone ukuba sinokukwazi ukuthetha oko kuthetha ntoni:
Xa ndisemntwana ndaya kwiDisneyland.
Ngaba isigwebo sibhekisela eluhambweni oluthile ndithatha kuBukani boBugcisa? Okanye kuthetha ukuba ndandisoloko ndaya khona, njengoko ndathi ndathi ndingumntwana "ndaya esikolweni"?
Ngaphandle kwimeko ethile, isivakalisi singenangqondo, akunjalo?
NgesiSpeyin, asinalo loo nto.
Kungenxa yokuba iSpanishi inamaxesha amabini ambalwa adlulileyo . Lezo zihlandlo ezimbini ziqala ( el pretérito ) kunye nokungapheleli ( el imperfecto ) . Qaphela ukuba umehluko ucetyiswa ngamagama abo. Ixesha elingaphelele "alifezekanga" ngokuba aluphelelanga okanye alukho ngexesha elithile . Ngaphambi kolunye uhlangothi, ngokubanzi, kubhekisela kwisenzo esenzeka ngexesha elithile .
Makhe sibone iinguqulelo ezimbini zesiSpanish zesivakalisi ekuqaleni kwesi sifundo. Okokuqala, kuqala:
I-Cuando era niño fui i Disneyland.
Ekubeni isenzi sesibini kwesi sigwebo ( fui ) sisekuqaleni, kubhekisela kwisenzo esenzeka ngexesha elithile. Ngako oko, ngesiNgesi, kuya kuthiwa kwimeko ethile, njengale "Kwiholide lethu xa ndibe kwibanga lesihlanu ndaya kwiDisneyland."
I-Cuando era niño iba yi-Disneyland.
Ekubeni i- iba engaphelelekanga, ibhekisela kwisenzo esenzeka ngexesha elithile. Umzekelo wendlela oku kungasetyenziswa ngayo ngesiNgesi kuya kuthiwa "Xa ndihlala eSouth California I (ngokuqhelekileyo) ndaya kwiDisneyland."
Ngokuqhelekileyo, ifomu elingaphelele liguqulelwe ngokuthi " lisetyenziswe ." Isivakalisi esingentla singasetyenziswa ngokuthi "Xa ndisemntwana ndandisoloko ndiya kwiDisneyland." Ifom engafezekanga kanokuthi iguqulelwe "kwixesha elidlulileyo lokuba" _____ kwifom, ebonisa ukuba isenzo senzeke.
"Xa ndihlala eSouth California ndaya kwiDisneyland rhoqo." Nazi ezinye izivakalisi zezivakalisi ezimbini:
Ayer (ixesha elithile) llovió (kwangaphambili). Izolo kwawa.
Iba (ukungapheleli, akukhoxesha elichanekileyo) ir ir la piscina, pero llovía (engaphelelekanga, akukhoxesha elichanekileyo, umsebenzi oqhubekayo). Ndaya ku echibini, kodwa kwakunetha.
I-Cuando yo comía (engaphelelekanga, akukhoxesha elithile, isenzo asiphelelanga) , im amigo me llamó (kwangaphambili, isiganeko esenzeka kwaye sazaliswa ngexesha elithile) nge-teléfono. Ngexa ndandidla, umhlobo wam wandibiza kwifowuni.
I-Cuando yo comía (engaphelelekanga, akukhoxesha elithile, isenzo sigqibeleleyo ) , yo charlaba (ongaphelelekanga, akukho pheliso olulodwa lwezenzo) i-amigos. Ngexa ndandisidla ndaxoxa nabahlobo bam.
I-Cuando el hablaba (engaphelelekanga, akukho xesha elithile, isenzo esiqhubekayo) , tropezó (kwangaphambili, isenzo esigqibeleleyo ) con la alfombra. Ngethuba wayethetha, wahlutha kwiphephethi.
Enye indlela yokwahlula iifom zintlobo ezimbini kukucinga ngokuqala njengento ecacileyo kwaye engafezekanga ngokungapheliyo . Enye indlela yokucinga ngayo kukuba ukungafezekanga kudla ngokubhekiselele kwimvelaphi enye into eyenziwa ngayo. Ixesha leCoando (ukungapheleli, imvelaphi yesigatya sesibini kwesivakalisi) pobre, compré un Volkswagen.
Xa ndihluphekile ndathenga iVolkswagen. Yingakho iimbonakalo kwixesha elidlulileyo zidinga ukungapheleli. Eran las dos. Kwaku-2 ntsimbi.
Ngamanye amaxesha isenzi sinokuguqulwa ngokusebenzisa igama elithile ngokuxhomekeke ekubeni ngaba isilungiso okanye ukungapheleli kusetyenziswa.
Conocí e María . Ndadibana noMaría.
Conocía a María , ndazi uMaría.
Intlanganiso kaMaría yenzeka ngexesha elichanekileyo, kodwa ukwazi yena akuzange kwenzeke. Le ngcamango ichazwe ngokuqhubekayo kwisifundo sethu ngokusebenzisa ixesha elidlulileyo kunye nezenzi ezithile .
Gcina ezo zihlulo engqondweni uze ukwazi ukugcina ixesha elichanekileyo.
Ezinye ixesha elidlulileyo: Ukuba ubugcisa, iSpanish inezihlandlo ezimbini ezilula ezibonisa ukuba zixesha elidlulileyo, amaxesha esiyicinga ngawo xa sithetha ngexesha elidlulileyo kwisiNgesi. Esinye isenzi saseSpain sisetyenziswa singaqwalaselwa njengolu hlobo lwangaphambili. Ngokomzekelo, kukho ukuthobela okungafezekiyo kusetyenziswa kwizigatshana ezixhomekeke kwi- viniera " Yo esperaba uJosé viniera ," ndalindele ukuba uJosé eze.
Kukho amaxesha ahlukeneyo angamakhomitha angabhekisela kwizenzo zangaphambili: U-comprado , ndithenge; yo estaba inkcazo , ndithenga. Ezi fom rhoqo zifundwa xa zifunda iifom ezilula zezenzi ezixhasayo .
Ukungahambi kakuhle komntu: Qaphela ukuba iifom zabantu bokuqala nabesithathu ezingaphelele zidibene ngokufanayo. Ngoko " hablaba " ithetha ukuba "ndithetha," "wayethetha," "wayethetha" okanye "uthetha." Isibhengezo singasetyenziselwa ukucacisa ukuba umongo awukho.
Isikhokelo sokuQondanisa 'uMthengisi' (ukuzisa)
Iilwimi zesiTaliyane: I-Stirare
20 I-Photoshop Requesters Abaye bahlambalaza Ngetyala Ngomnye Othakazelisayo
IThe Legend of Frau Holle